MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS » Myanmar has agreed to the appointment of Mr. Asfaw Dingamo Kame as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Federal Democratic Republic of Ethiopia to the Republic of the Union of Myanmar
The Government of the Republic of the Union of Myanmar has agreed to the appointment of Mr. Asfaw Dingamo Kame as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Federal Democratic Republic of Ethiopia to the Republic of the Union of Myanmar, with residence in New Delhi.
Mr. Asfaw Dingamo Kame was born on 26th August 1961. He obtained Master’s Degree in Mining Geology Engineering from Higher Institute of Mining and Metallurgic of Moa, Cuba in 1985. From 2005 to 2010, he served as Minister of Water Resources at Federal level. He also served as Advisory to the Director-General and as Deputy Director-General of Ethiopian Sugar Corporation from 2010 to 2014. From 2014 to 2016, he was Director-General of Ethiopian Oil and Natural Gas Development Enterprise. He has been serving as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Federal Democratic Republic of Ethiopia to India, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal and Thailand since 2016.
He speaks Sidamigna, Amaric, English, Spanish and Portuguese languages. He is married.
မစ္စတာ အက်စ်စဖော ဒင်ဂမို ကာမီ အား နယူးဒေလီမြို့အခြေစိုက် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော အီသီယိုးပီးယား ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်ရန် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရက သဘောတူညီပြီးဖြစ်သည်။
မစ္စတာ အက်စ်စဖော ဒင်ဂမို ကာမီ ကို ၂၆-၈-၁၉၆၁ ရက်နေ့ တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ၁၉၈၅ ခုနှစ်တွင် သတ္တုတူးဖော်ရေး ဘူမိဗေဒအင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်၊ မဟာဘွဲ့ကို ကျူးဘားနိုင်ငံ၊ မိုအာမြို့၊ သတ္တုတူးဖော်ရေးနှင့် သတ္တုဗေဒအဆင့်မြင့်တက္ကသိုလ်မှ ရရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်အထိ အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံ ဖက်ဒရယ်အဆင့် ရေအရင်း အမြစ်ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးအဖြစ် လည်း ကောင်း၊ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်မှ ၂၀၁၄ ခုနှစ်အထိ နိုင်ငံပိုင် သကြားကော်ပိုရေးရှင်းတွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၏ အကြံပေးနှင့် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် အဖြစ်လည်ကောင်း၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အထိ နိုင်ငံပိုင် ရေနံနှင့်သဘာဝဓါတ်ငွေ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေးလုပ်ငန်းတွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အဖြစ် လည်းကောင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါ သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှစ၍ အိန္ဒိယ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ သီရိလင်္ကာ၊ နီပေါနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော အီသီယိုးပီးယား ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအဖြစ် ထမ်းဆောင်လျက် ရှိပါသည်။
၎င်းသည် ဆီဒါမစ်နာ၊ အမာရစ်၊ အင်္ဂလိပ်၊ စပိန်နှင့် ပေါ်တူဂီဘာသာတို့ကို တတ်ကျွမ်းပါသည်။ ၎င်းသည် အိမ်ထောင်သည်တစ်ဦးဖြစ်သည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၅ ရက်